कता जाँदैछ हाम्रो अर्थतन्त्र ? यसो भन्छन् विज्ञहरु | Kendrabindu Nepal Online News
19831918 730176 6362335 12739407
22592 73 6206 16313
कता जाँदैछ हाम्रो अर्थतन्त्र ? यसो भन्छन् विज्ञहरु
२६ असार २०७७, शुक्रबार १७:००
चीनबाट विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका अधिकांश मुलुकहरुको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । कोरोनाका कारण विश्वका मुलुकहरुमा पर्यटन उद्योग व्यवसाय, रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी, सहायता तथा आन्तरिक वितरण प्रणालीमै असर परेको छ । जसका कारण अर्थतन्त्र जरजर अवस्थामा पुगेको छ । ती मुलुकहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, नेपालको सन्दर्भमा पनि अब अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा जताजतै उठेको देखिन्छ । साँच्चै नै अबको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सबैका आआफ्नै तर्क छन् । कोरोनाका कारण मुलुकका उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, कृषि, रेमिट्यान्स, बैदेशिक लगानी, बाह्य सहयोग लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लक्षित गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरन्जीबि नेपालले अबको अर्थतन्त्र कोरोनासँगै जुध्दै अगाडी बढ्नु पर्ने बताएका छन् । ‘पर्यटन उद्योग व्यापार लगायतका क्षेत्रमा बहुपक्षीय असर परेको छ । त्यसैले कोरोनासँगै सर्भाइभ गर्दै आगाडी बढ्नुपर्छ ।’ पूर्व गभर्नर नेपालले भने । नेपालको अर्थतन्त्र भीसेभ, डब्लु सेभ, एल सेभ र यु सेभको रुपमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर भीसेभको अर्थतन्त्र भने नहुने देखिएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार अत्यन्त विकसीत देशमा पनि कोरोनाको संक्रमण बढेको र ती मुलुकहरुमा लकडाउनलाई पार्सियलका रुपमा पनि लिन थालिएको बताए । कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म यसले मानव सभ्यतालाई असर पार्ने उनको भनाइ थियो । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकाहरुका लागि युरोपियन मुलुकहरुले १५ सय देखि ३५ सय सम्म खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरिरहेको भए पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यसो गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै श्रमिक वर्ग बढी पीडित हुने नेपालको आँकलन छ । कोरोनाका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्ने उनले बताए । ‘हाम्रो आर्थिक वृद्धि २.४ प्रतिशत हुने भन्ने अनुमान थियो, तर त्यस्तो स्थिती होला जस्तो देखिँदैन ।’ उनले भने । हाम्रो अर्थतन्त्र कुन सेभबाट जाने हो भन्ने स्पष्ट नभएको नेपालको धारणा छ ।
सरकारले वर्षौ अघिदेखि कृषिलाई आधुनिकिकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्नुका साथै कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्ने योजना ल्याइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा पनि प्रकृतिमा आधारित रहेर अबको अर्थतन्त्रलाई डोहोर्याइने बताउँछन् । ‘ प्रकृतितर्फ आधारित भएर अबको अर्थतन्त्र अगाडी बढ्ने देखिन्छ ।’ बाँस्कोटाले भने । उनका अनुसार कोरोना अघि पर्यटनले जुन क्षेत्र ओगटेको थियो, त्यो ठाउँ विस्तारै कृषि क्षेत्रले लिनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार बढ्ने, कृषिमा आधारित प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ बढ्ने, कृषिमा अर्गानिक उत्पादन बढ्दै जाने बाँस्कोटाको आँकलन छ । उनका अनुसार किसानहरुले अब धान मकै छोडेर महँगा जडिबुटीहरु गुर्जो, सूर्यमुखी, तोरी लगाउने क्रम बढ्नेछ । त्यस्तै, महँगा र रोग प्रतिरोधात्मक फलफूल ड्रागन फुड , स्टावेरी लगायतका फलफूल लगाउने क्रम बढ्न जाने बाँस्कोटाले बताए । अब मानिसमा स्वरोजगार बढ्ने पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले कोरोना भाइरस कहिलेसम्म रहन्छ तथा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण कसरी हुन्छ भन्नेमा अर्थतन्त्र निर्भर हुने बताए । विश्वका अधिकांश मुलुकहरु कोरोना नियन्त्रणका साथै अर्थतन्त्रलाई पनि कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएको डा.शर्माको भनाइ थियो । शर्माका अनुसार नेपाल पनि यहि बाटोमा जानुको विकल्प छैन । नेपालको कृषि आत्मनिर्भरमुखी संक्रमणकै बिचमै पनि ग्रामिण क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए । जसका कारण कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्याल केन्द्रबिन्दु डट कमका अर्थ ब्यूराे प्रमुख हुन् । विगत एक दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय उनी आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)की कार्यसमिति सदस्य हुन् ।
Prev‘तत्काल सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्न सक्दैनौं’– यातायात व्यवसायी
विकास दुबेको उज्जैनमा गिरफ्तार, कानपुरमा इन्काउन्टरNext
कोरोनाले अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा कस्ताे प्रभाव ?
वजेटमार्फत औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न व्यवसायीहरुको सुझाव
कोरोना संक्रमणले शिथिल बन्दै अर्थतन्त्र
दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धिदर दशककै न्यून
अर्थतन्त्र गौरव गर्न लायक बाटोमा : अर्थमन्त्री खतिवडा
उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाऔँ : अध्यक्ष दाहाल
शीर्ष नेतालाई आफ्ना टाउका नगन्न नेकपा सांसदको सुझाव
अब यातायात कार्यालयमा सवारी नविकरणको काम पनि जोरबिजोर प्रणालीबाट
नेकपा महासचिव पौडलका अंगरक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
'बैंकमा आलोपालो गरेर काम गर्नु'–राष्ट्र बैंक
'अब सबै व्यवसाय अनलाईन प्रणालीमा जानै पर्छ'–सौरभ ज्योति (भिडियोसहित)
आज काठमाडौं उपत्यकामा ९२ जना संक्रमित थपिए
आज २ जनाको मृत्यु, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७५ पुग्यो
थपिए ३८० नयाँ संक्रमित, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २२,९७२ पुग्यो
अभिनेत्री केकी अधिकारीको दर्शन- 'बाइकट बुल्लिज ! अति गरे क्षति हुन्छ'
सीसीएमसीका संयोजक पोखरेललाई उपत्यका नगरपालिका फोरमको सुझाव-'नाकामा कडाई गरौँ'